Osimiri Pivka, Pivka - Postojna
Ogologo: 27 kilomita;
Isi: Zagorje, Pivka;
Mmiri Pivka na-asọba na nnukwu ọgba nke Slovenia - Postojna Pit . Ogologo osimiri ahụ dị n'ọgba dị ihe dị ka mita 800, ọ na-agafe n'ọgba ahụ, na-esi na nkume ahụ pụta ma gbute ugwu ala calsọs Kras, wee gaa n'ọgba ọzọ, wee gbasaa n'ókèala nke mpaghara ahụ. Osimiri Pivka bụ ihe anya dị egwu, ya mere, ọ na-ewu ewu na ndị njem nleta.
Osimiri Pivka - nkọwa
Ogologo oke osimiri ahụ dị ihe dị ka kilomita 27, ebe ngwakọta nke efere ya bụ ihe dị ka 2000 km². Osimiri Pivka na-abanye n'Oké Osimiri Ojii, ọ bụ ezie na Adriatic dị nso na ya. Na olulu mmiri Pivka nke osimiri, nke nwere diameters dị iche na ntụgharị nke mmiri na rifts, ebe ọ dị ize ndụ maka ndị na-egwu mmiri, n'ihi na enwere ọsọ ọsọ. A na-ahụ mmiri dị ukwuu n'ime mmiri na January na May, ọ na-agbapụta n'oge ahụ site na Oketto ruo August. Otu n'ime ihe ndị kachasị mma na nke kachasị mma nke osimiri ndị dị na Europe bụ ngwakọta nke Pivka na Raki.
Ezigbo Ugwu A chọtara Postojna Pit na ndagwurugwu osimiri na narị afọ nke 17. Ná mmalite narị afọ nke 19, otu onye bi n'ógbè ahụ, bụ Luke Cech, nyochaa 300 mita nke amaokwu ọgba ma malite ịkpọ ndị mmadụ ka ha nyochaa ha. Ruo ugbu a, ihe dị ka kilomita 5 na-emeghe maka nnyocha. N'ime ọgba ahụ na-eburu ọkụ eletrik, ya mere enwere ike ịhụ mma ahụ na ọkụ. N'ebe ahụ, ọ bụ n'ọgba bụ ọdọ mmiri dị n'okpuru ala, ọ bụkwa mmiri iyi mmiri nke ọ rụrụ. Mmiri dị n'okpuru ala dị ọcha, transperent na oyi, n'ihi na n'ọgba nke Postojna Pit, a naghị aghọta okpomọkụ karịa 8 Celsius.
Ndị ọbịa nwere ike ile anya na osimiri ahụ dị n'ọgba ahụ, ebe o wuru ọgba na ikike ya, ma gbanwee ya ruo ọtụtụ puku afọ. Mmiri emeela ka ndị na-ese foto dị iche iche mara mma. O wuru ụdị ihe ndị dị mma nke nkwụsị ala ma sachaa ihe niile na-adịghị mma, emesịa ọ daa ala ma akụkụ ya na-asọba n'okpuru ọgba ahụ. Otu n'ime ihe ndị a ma ama bụ Cypress, bụ nke na-agụnye eriri eri eriri dị iche iche ma na-egbuke egbuke dị iche iche, site na pink ruo uhie.
Iji rute ebe osimiri Pivka, ebe Postojna Pit dị, ọ ga-ekwe omume na ụgbọ ala akwụ ụgwọ n'okporo ụzọ A1 si n'obodo Koper , Trieste ma ọ bụ site na bọs si Ljubljana na ebe ndị ọzọ.
Museum nke Vikings Lofotr
Obodo Faroe Islands
Ebe e wusiri ike
Ndagwurugwu nke windo
Njem na Cyprus - Paphos
Obio Charles Lorraine
Egwuregwu arụ ọrụ na-enye nwa ara
Ụtụ fillet nke toki - Ezi ntụziaka
Okwu ya Kanye West meriri obi ọtụtụ nde mmadụ
"Khrenovina" na tomato na garlic maka oyi
Justin Timberlake kwadoro maka ire ụlọ dị elu maka ihe ruru nde $ 8
Ụdị uwe mwụda maka zuru ezu
Obere azụmahịa - ihe ị ga-eme?
Bia n'ụlọ - ntụziaka zuru ezu maka nkwadebe ụfụfụ na-enweghị ngwá ọrụ pụrụ iche
Esi esi esi nri?
Kedu ụdị rabbits achọ mma?
Escalope nke anụ ezi na frying pan - uzommeputa
Salad radish na anụ
Azụ mmiri julep
Uwe inyom maka ọrụ
Uwe uwe agbamakwụkwọ obere na ụgbọ oloko
Akwukwo apricots, fig, prunes maka ahihia
Beyonce na-ezobe nwa na vidiyo vidiyo
Kedu otu esi ahọpụta window windo dị mma?